Archive du 20200424
Finoana Mbola hikatona ny fiangonana Katolika
Raha nilaza ny eo anivon’ny Fiangonana FJKM fa hiverina hisokatra ny fiangonana fa kosa arahina fepetra dia ny fanajana ny lamina napetraky ny fanjakana, dia mitohy kosa ny fikatonan’ny Fiangonana Katolika na ny EKAR rehetra manerana ny Nosy.
Yann Davidson Vezo - Baskety Mamporisika ny tanora hiasa mafy hatrany
Anisan’ny mpitsara basikety Malagasy nahazo ny “certification” iraisam-pirenena ahafahana mitsara ny lalao basket 5x5 sy basket 3x3 i Yann Davidson Vezo 31 taona ka avy amin’ny resadresaka nifanaovan’ny MA (Morondava Autrement)
Very fanahy mbola velona ankehitriny ny valalabemandry manoloanana resaka tambavy. Miha mitombo andro aman’andro ny ahiahy ho an’ireo mitohy manadihady.
Fitaterana ana habakabaka Hiverina tsikelikely afaka 10 andro
Araka ny loharanom-baovao azo, dia hanomboka hiverina tsikelikely ireo sidina an’habakabaka mivoaka sy miditra an’i Madagasikara.
Fampiakarana saran-dalana any Itasy Arahina maso akaiky ireo fiara fitateram-bahoaka
Araka ny toromarika voaray tamin'ny ATT dia namafisina ny fandaminana momba ireo fiara fitateram-bahoaka mampifandray ny faritra Itasy sy Analamanga
Taxi an'Antananarivo Mangataka hiasa hatramin’ny 3ora tolakandro
Mangataka ny hanitarana ny fotoana hahafahany miasa hatramin’ny 3 ora tolakandro tahaka ny taksibe ireo mpamily fiarakaretsaka amin’izao fotoana izao eto Antananarivo.
Banky BNI Nanemotra 3 volana ny famerenam-bola ho an’ireo mpanjifany
Miara-mientana amin’ny Malagasy rehetra, indrindra fa ireo mpanjifany ny banky BNI Madagascar amin’izao fotoanan’ny hamehana ateraky ny fiparitahan’ny COVID 19 eto amintsika izao.
Antohomadinika Ankizy tsy ampy taona roa tratra nanendaka
Ankizy roa vao 16 sy 17 taona monja no tratran’ny polisy saika hanendaka tetsy amin’ny toby fiantsonan’ny taxibe etsy Antohomadinika ny alarobia lasa teo, toerana izay marihina fa mahavaivay tokoa.
ISOTRY Tratra teo am-panosehana moto halatra ilay lehilahy
Lehilahy iray no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin'ny CSP4 Isotry ny alakamisy 23 aprily teo noho ny resaka halatra moto.
Maneran-tany 65 155 indray voa omaly, 5033 indray maty
2 700 871 raha kely indrindra no voa maneran-tany, ka ny 65 155 dia tao anatin’ny 24ora farany.
Orinasa afaka haba Mpiasa 150 000 tsy ho voaloa ny karama…
Na efa miroso amin’ny fanatsaharana ny fihibohana aza tsy mbola misy fiantraikany amin’ny orinasa afaka haba izany, hoy Atoa Hery Lanto Rakotoarisoa Filohan’ny GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires).
Herisetra mahazo ny zaza amam-behivavy Eny Anosy, Tsaralalana , Tanjombato no hametrahana fitoriana
Niha nahazo vahana ny herisetra mahazo ny vehivavy sy ny ankizy tato ho ato. Miseho amin’ny endrika maro izy ireny toy ny fampijaliana, ny tsy fanomezana sakafo…
Akanjo fripy 500 Ariary dia efa mitafy
Maraina ihany no tena tsena hoy ireo mpivarotra ! Tsy maintsy hatao izay hahalafosana mba tsy handry fotsy hoy Tiana, mpivarotra friperie.
Fanasana tanana Fitaovana ho ana mponina 8 tapitrisa no ilaina
Hiaraha-mahalala ny maha-zava-dehibe ny fanasan-tanàna amin’ny savony, indrindra amin’izao ady ho fisorohana ny valan’aretina COVID-19izao.
Fanerena hisotro tambavy Mifanohitra amin'ny lalàmpanorenana
Tenin’ny Filoham-pirenena ny hoe tsy maintsy misotro ilay tambavy covid organics ny mpianatra miverina an-tsekoly, ary ajanony any an-trano rehefa tsy ampisotroina.
Fifaninanana "ady amin’ny Covid-19" Handray anjara i Madagasikara
Isan’ireo firenena 60 handray anjara amin’ny fifaninanana momba ny ady amin’ny coronavirus i Madagasikara ny 24-26 aprily.
Toetr'andro mangatsiaka "Tena hampahazo vahana ny coronavirus"
Misy ifandraisany tokoa ny toetr’andro sy ny fahasalamana, hoy ny Dr Razafindramavo Lalao Madeleine ekipa teknika avy amin’ny Sampandraharaha fahasalamana sy tontolo iainana .
Malagasy any ivelany 8 ireo tratry ny coronavirus, 3 namoy ny ainy
Malagasy miisa 8 no marary any ivelany amin’izao fotoana izao, dia any Togo, Sénégal, France, Chine, Suisse,… no misy azy ireo.
Fatran` ny CVO Mila serasera matotra kokoa
Sesilany ny fanehoan-kevitra teny amin` ny fiarahamonina noho ny tsy fifehezan` ireo ekipa mizara ny COV Organics (CVO) indrindra eny amin` ny fokontany.
Fihibohana Manova olona
Nandritra ny fihibohana dia maro ireo olona nanova fitafy na “look”. Tao ireo nanalava volon-doha sy volom-bava.
Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Nizara Covid-Organics teto Antanananarivo
Fifandrimbonan'ny samy ministera amin'ny ady amin'ny Covid 19, ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena dia nanatontosa fizarana aro vava